के कोभिड भ्याक्सिन व्यापार नै हो भन्ने लाग्छ ? - EKalopati
के कोभिड भ्याक्सिन व्यापार नै हो भन्ने लाग्छ ?
-नेपालले अनुदान पाएको बाहेक किनेको कोभिशिल्ड खोपको मूल्य प्रतिडोज ३ डलर हो । नेपाललगायतका गरिब देशले उत्पादन-मूल्यमैं यो खोप प्राप्त गरेका छन् । दुई डोज दिनुपर्ने हुनाले प्रतिव्यक्ति खोप-मूल्य ६ डलर अर्थात ७ सय रुपियाँ जति पर्न आउँछ । यो नेपालले खरिद गरेको एउटा मास्कको मूल्यभन्दा कम हो ।
-नेपालले ओम्नीमार्फ़त खरिद गरेको एउटा एन-95 मास्कलाई नै ८ डलरभन्दा धेरै तिरिएको थियो । एउटा स्वास्थ्यकर्मीले दिनमा ३-४ वटा यस्ता मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पन्जा, अन्य पीपीई, जुत्ताकभर, स्यानिटाइजरलगायतमा दैनिक ठूलो खर्च जोडिन्छ ।
-पीसीआर परीक्षणमा नै प्रतिव्यक्ति एक लाखसम्म खर्च भएको त सरकारका प्रवक्ताले नै बताएका थिए । सङ्क्रामक रोग भएकाले पहिचान, आइसोलेशन र औषधिउपचारमा धेरै ठूलो खर्च हुन्छ । यसको तुलनामा खोपको मूल्य नगण्य हो ।
लगभग एउटा मास्कको मूल्यमा आउने भ्याक्सिनबाट कुनै देशले टन्न पैसा कमाउँछन् भन्ने तर्कका लागि पर्याप्त तथ्य भेट्न सकिन्न । बरु भ्याक्सिन नआउन्जेल धेरै देश र कम्पनीले पीपीई लगायतका सामग्रीबाट पर्याप्त नाफ़ा कमाउँदै आएका छन् र धेरै राजनीतिकर्मीले मोटो कमिशन खान पाएका छन् ।
सरकारले किनेका मास्क, स्यानिटाइजर, पन्जा र पीपीई स्वास्थ्यकर्मीभन्दा पहिले नेताकहाँ पुग्ने गरेको देखिएकै हो । खोप त आफू र आफन्तलाई लगाउने बाहेक थन्क्याउने गरी तिनको घरमा जाने संभावना कम हुन्छ ।
-कोभ्याक्समार्फ़त धेरै गरिब देशले लाखौं डोज भ्याक्सिन निःशुल्क पाउँदै छन् । यसमा बेलायतले अरबौं रुपियाँ सहयोग गरेको छ । अमेरिका र रूसले सहयोग नगरे पनि अन्य थुप्रै देशले यसमा योगदान दिएका छन् ।
भ्याक्सिन लगाउने जतिलाई कोरोना भाइरसले नछुने भन्ने पनि होइन । ७० देखि ९५% सम्म प्रभावकारिता भएका भ्याक्सिन छन् ।
यसको अर्थ सय जना भ्याक्सिन लगाएका मध्ये ३० जनासम्ममा भाइरस सर्न सक्छ । तर भ्याक्सिन लगाएकाहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको इम्युनिटी विकास हुने हुनाले सङ्क्रमण भए पनि सिकिस्त हुने या मृत्यु हुने संभावना अत्यन्त न्यून हुन्छ । त्यसैले भ्याक्सिनको उपयोगिता झन्डै १००% नै हुने मानिएको छ । यो अध्ययन र निष्कर्ष विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला र वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट आएको हो, कुनै एउटा देशको प्रपोगण्डा होइन । खोप कुनै एउटा देश या कुनै एउटा मात्रै कम्पनीले बनाएको छैन । अब सिङ्गो विश्व, विश्वविद्यालय र वैज्ञानिकलाई मूर्ख मान्न पनि सजिलो छैन । तिनकै गहन अनुसन्धान र उत्पादनले गर्दा पोलियो, धनुष्टङ्कार र क्षयरोगजस्ता घातक बिमारीबाट आज हामी लगभग मुक्त छौं र बाँच्न पाएका छौं ।
अझै पनि भ्याक्सिन व्यापार नै हो जस्तो लाग्छ भने, तर्क र तथ्य प्रस्तुत गर्नुहोला । कन्भिन्सिङ् लाग्यो भने म पक्कै लाइक गर्नेछु ।
यो लेख लेखकको फेसबुकबाट लिइएको हो ।
Previous articleप्रश्नका चाङ
Next articleनागरिकता अध्यादेशले अन्यायमा परेकालाई राहत ?